IREO LAFIN-JAVATRA ROA MIANTOKA NY FAHARETANA:
Ato anatin'ny vanim-potoana farany iandrasana ny fiavin'ny Tompo fanindroany hitsara ny velona sy ny maty isika izao, ry havana. Izany fotoana hiavian'ny Tompo izany no ilay "andron'ny fampakaram-bady" ambaran'ny fanoharana eto amin'ny Lioka 25:1-13. Samy miandry fatratra izany ny kristianina rehetra; kanefa tsy maintsy ho izay maharitra amin'ny fiandrasana ihany no tafiditra ao amin'ilay fanasana lehibe dia ny fanjakan'ny lanitra izany. Andeha ary hojerentsika IREO LAFIN-JAVATRA ROA MIANTOKA NY FAHARETANA:
I NY FAHAIZANA MIOMANA
Virjiny folo no niara-nivoaka hitsena ny mpampakatra. Andro alina ny fampakaram-bady. Noho izany dia tsy maintsy ilaina ny fitaovam-pitsilovana dia ny "fanilo" sy izay mety ho fitaovana miaraka aminy. Nahay niomana ny antsasak'izy ireo. Tsy nohadinoiny ny nitondra "solika fitaiza" (pétrol izany raha jiro any ambanivohitra no resahina) satria tsy fantatra ny fotoana hahatongavan'ny mpampakatra. Tsy mba mailo tamin'izany kosa ny antsasany fa dia ny jiro sy ny ambina solika kely tao anatiny tao no nentina dia lasa, ary izany no maha adala azy ireo."fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza", hoy ny and.3: tsy mahay miomana, hany ka izao tsy tafiditra ny fanasana izao.
Ry havana, mahaiza miomana raha te ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Eto anivon'ny haizaim-piton'izao tontolo izao isika kristianina. Ny finoana no jiro ampiasaina amin'izany ary ny asa eo anivon'ny fiangonana no solika ikolokoloana izany finoana izany. Tsy mety ny hoe manam-pinoana aho dia izay. Adala tahaka ireo virjiny sasany koa ianao raha izany ihany. Tsy afa-misaraka ny jiro sy solika fa maty ho azy eo koa ny finoana raha tsy arahina asa (Jak.2,26b). Mety ho faty na ho foana ny finoana. Koa ny fahaizanao mikolokolo ny finoana ao anatinao no maneho ny fahaizanao miomana ary haharitra amin'ny fiandrasana ny Tompo ianao raha izany, ka hiara-miditra aminy ao amin'ny fanasana satria "izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady" (and 10b). Noho izany, izay tokony hatao hikolokoloana ny finoana dia ataovy avokoa.
II NY FAHAIZANA MIAMBINA
Rehefa tsy mahay miomana dia tsy mahay miambina ho azy. hadinon'ireo virijiny adala, na mety ho tsy tao an-tsainy mihitsy, ny solika fitaiza (kanefa na hadino na tsy ao an-tsaina: mariky ny tsy fahaizana miomana avokoa izany). Ny andro maizina, ny kely nananana lany, ny jiro tsy maintsy harehitra, inona no hatao? Tsy maintsy handeha hividy rehefa tsy nomen'ny olona ny azy. Dia tsy maintsy hiala an-daharana aloha izany, kanefa izany no mariky ny tsy fahaizana miambina. Nanana fotoana natoriana fa tsy nahalala nanara-maso ny fandehan'ny solika izy ireo. Azony natao tsara mantsy, alohan'ny natoriana, ny nijerijery matetika ny fahalanian'ny solika, rehefa hadino ihany ny tany an-trano; ka rehefa hita fa tsy haharitra ny solika dia nirahina nividy avy hatrany ny sasany ka rehefa tonga ireny vao samy natory. Azony natao mihitsy koa ny tsy natory mihitsy fa nandamina ny olan'ny fanilony. Fa efa tsy mahay miambina mihitsy e! Efa tsy mba mailo amin'ny zavatra rehetra. Banga ho azy ny toeran'ny mpiambina ary dia banga manaraka izay koa ny toerana tao amin'ny fanasana.
Ry havana, tsy azo mora foana ny fanjakan'ny lanitra fa mila fahaiza-mandamina avy aminao izany. Efa foin'Andriamanitra ho anao izany fa ny fahaizanao mandray azy no takian'Andriamanitra. Efa mazava ny tenin'ny Tompo fa "tsy fantatra na ny andro na ny ora" (and.13). Tsy misy fotoana tsy iandrasana no dikan'izany. Koa izay mety ilainao rehetra eo am-piandrasana ny Tompo dia omany aloha, angony aloha, ataovy vonona aloha, fa ny olona tsara omana no mahay miambina. Fiainam-bavaka, fahalalàna ny Soratra Masina, fandraisana ny Sakramenta, fanompoana eo anivon'ny sampana, indrindra ny fijoroana ho vavolombelona eo anivon'ny fiaraha-monina: efa nomaninao avokoa ve izany? Solika fitaiza tsy tokony hohadinoin'ny kristianina miandry ny fiavian'ny Tompo ireny. "Raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra" hoy ny and 10a. Koa anaovy jery todika matetika fa sao ireny no tsy ampy ka hahatonga anao hiala an-daharana eo amin'ny fiandrasana ny Tompo. Olona efa masaka amin'izany rehetra izany no haharitra amin'ny fiandrasana ny tompo.
Ry havana, hitantsika teo ary fa ny olona mahay miomana ihany no mahay miambina. Rehefa nanao araka izay tratranao ianao dia tsy hiroaroa saina intsony eo am-piandrasana ny fotoana hiavian'ny Tompo satria efa niomana ianao, efa niambina ianao. Mbola tsy tapitra anefa ny fotoana fiomanana, mbola ao anatin'ny fotoana fiambenana koa isika izao. Koa aza matoritory fa mahareta fa izay maharitra ihany no ho voavonjy. Amen.